Lionel Messi oo si dhab ah ugu fikiraya inuu ka tago Barcelona iyo Man City oo la kulantay…. – Gool FM
Shaxda rasmiga ah Kooxaha Ajax iyo Liverpool ee tartanka Champions League oo la shaaciyey
Douglas Costa oo niyadjabiyay Robert Lewandowski kaddib markii uu ka doorbiday Cristiano Ronaldo
Mesut Özil oo si adag ugu jawaabay in laga saaray liiska xiddigaha Arsenal ugu qeyb galaya Premier League
“Mendy waa goolhayaha koowaad ee kooxda Chelsea” – Lampard oo niyadjabiyay Kepa
Muxuu ka yiri Ansu Fati in Lionel Messi uu kaga garab ciyaaro kooxda Barcelona??
Pjanic oo ka hadlay kaarkii roosaha ee Gerard Pique & inuu seegayo kulanka Barcelona iyo Juventus
Inkastoo barbaro goolal la’aan ah ay la galeen Seville… Lampard oo muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay qaab ciyaareedka Chelsea
Tababare Thomas Tuchel oo ka hadlay guuldarradii kooxdiisa PSG ka soo gaartay Man United
Muxuu ka yiri tababare Solskjær kaddib rikoodhkiisii taariikhiga ahaa aan horey loo arag ee kooxda Man United?
Lionel Messi oo si dhab ah ugu fikiraya inuu ka tago Barcelona iyo Man City oo la kulantay….
Byare August 21, 2017
(Catalonia) 21 Agoosto 2017. Manchester City ayaa la kulantay wakiilada Lionel Messi si ay uga wada hadlaan heshiis suuro gal ah uu ugu soo dhaqaaqayo Etihad Stadium.
Laacibka reer Argentina ayaa la sheegayaa inuu iminka si dhab ah uga fikirayo sidii uu uga tagi lahaa Camp Nou sida uu warinayo Daily Record.
Man City waxay diyaar la tahay inay bixiso lacagaha lagu bur burin karo heshiiska Lionel Messi ee 275 milyan oo bound.
Camaaliqada Premier League ayaa la sheegayaa in usbuucii la soo dhaafay ay maqaaxi ku taala Barcelona kula kulmeen wakiilada xiddiga shanta jeer ku guuleystay Ballon d’Or si ay isugu dayaan inay la gaaraan heshiis taariikhi ah.
30 jirka ayaa bishii la soo dhaafay heshiis 4 sano ah la gaaray Barca kaa oo ka dhigaya laacibka ugu mushaarka badan adduunka.
Laakiin madaxwayne ku xigeenka kooxda Jordi Mestre ayaa si aan caqli gal ahayn daaha uga rogay inaan weli heshiiska la saxiixin taa oo damac hor leh galisay kooxda ka dhisan magaalada Manchester.
Iyadoo ay jirto in Man City ay diyaar u tahay ina bixiso lacagaha lagu bur burin karo heshiiska Messi ayaa waxa misane isku dayi karaan inay heshiiska xorta ah kula soo wareegaan kal ciyaareedka soo socda marka uu dhoco qandaraaskiisa.
Nemanja Matic oo ku kalsoon in Man United ay soo bandhigi doonto xiliciyaareed fiican
Arsenal oo iminkaba isaga hartay loolanka Premier League…(Aqri Tiro-koobkan!!!!!)